I-WestJet ixhasa ukugonywa okunyanzelekileyo kwabasebenzi beenqwelo moya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-WestJet ixhasa ukugonywa okunyanzelekileyo kwabasebenzi beenqwelo moya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelomoya zisebenza ukuphumeza imfuneko yokugonya kunyanzeliswa ngurhulumente kubasebenzi beenqwelo moya abasebenza ngokusemthethweni ngo-Okthobha.
I-WestJet okwangoku inabasebenzi abamalunga ne-6,000 WestJetters, ngelixa i-4000 ihlala ingasebenzi okanye ivutha ngumlilo.
I-Swoop okwangoku inabasebenzi abangama-340, ngelixa abangaphezu kwe-170 behleli bengasebenzi okanye betyhafile.
I-WestJet Group iya kuhambelana nemfuneko yokuba abahambi basekhaya bagonywe ngokupheleleyo okanye bavavanywe ngaphambi kokuhamba.
Iqela leWestJet namhlanje lisamkele isibhengezo esenziwe nguMphathiswa Wezothutho u-Omar Alghabra ngokubhekisele kugonyo olunyanzelekileyo lwabasebenzi beenqwelo moya.
Umphathiswa Wezothutho u-Omar Alghabra
"Siyaqhubeka nokuba liqabane elomeleleyo kupapasho lokugonya lwaseCanada kwaye sisebenza ngokuzimisela ukwenza umgaqo-nkqubo karhulumente kunyango olunyanzelekileyo lwabasebenzi beenqwelomoya," utshilo uMark Porter, I-WestJet Sekela Mongameli, Abantu neNkcubeko. "Ugonyo yeyona ndlela isebenzayo yokuqinisekisa ukhuseleko lweendwendwe zethu kunye nabasebenzi, ngelixa kuthintelwa ukusasazeka kwe-COVID-19."
"Siyaqonda ukuba abantu bethu baya kuba nemibuzo kwaye bazakuxoxa nabasebenzi bethu kunye namaqela ezabasebenzi ngexesha langempela," uqhubeke uMnu Porter. "Sifuna iinkcukacha ezongezelelweyo kurhulumente wobumbano malunga nemfuno kwaye sizimisele ekusebenzisaneni ukuqinisekisa ukuphunyezwa ngempumelelo komgaqo-nkqubo ngasekupheleni kuka-Okthobha."
I-WestJet Okwangoku inabasebenzi abamalunga ne-6,000 WestJetters, ngelixa i-4000 ihlala ingasebenzi okanye ivutha. Swoop Okwangoku inabasebenzi abangama-340, ngelixa abangaphezu kwe-170 behleli bengasebenzi okanye betyhafile.
The Iqela leWestJet iya kuthobela imfuneko yokuba abahambi basekhaya bagonywe ngokupheleleyo okanye bavavanywe ngaphambi kokuhamba. Iqela leenqwelomoya lixhasa ukuba uvavanyo lwe-antigen olukhawulezileyo luyinto eyamkelekileyo, efikelelekayo kunye nexabiso eliphantsi kubahambi abangacacanga.
Abantu: Sukusebenzisa iziyobisi ...
IPortugal ihlala ivulekile kubahambi baseMelika ngaphandle kwe-EU ...
I-Bahamas ibhengeza ukuThatha inxaxheba kwayo kwi-WTM yaseLondon...
Uxolo ngoKhenketho ngoku-Nangona Ingekho Kuphela